Obbo Tasfaayee Urgee walitti bu’iinsa iddoo adda addaatti umaamaa jiru keessa harka qabu jedhame – Fana Broadcasting Corporate
Obbo Tasfaayee Urgee walitti bu’iinsa iddoo adda addaatti umaamaa jiru keessa harka qabu jedhame
Finfinnee, Hagayya 9,2010(FBC)-Hoggansi Waajjira Odeeffannoo fi Nageenya Ityoophiyaa obbo Tasfaayee Urgee haleellaa boombii Waxabajjii 16 hogganuu fi hirmaachisuun shakkamanii dhimmi isaanii poolisii Federaalan qoratamaa jiru, biyyattii keessatti walitti bu’iinsa umaamaa jiru deeggarsa Birrii fi meeshaa waraanaa wal qabatee harka keessaa kan qaban ta’uu qorataan poolisii ibse.
Dhaddachi federaala 1ffaa qorannoo poolisiin raawwate dhaggeeffateera.
Haaluma kanaan qorataan poolisii shakkamtoota Finfinnee fi naannolee adda addaa jiranii too’annoo jala oolchuf ajaja baasuu himeera.
Haleellaa biyya keessa raawwate ka’umsa godhachuun namoota harka keessaa qaban biyya alaa jiran too’annoo jala oolchuf biyyoota waliin mari’atamaa jiraachuu ibsameera.
Ragoolee hafan dhaggeeffachuu fi yeroo ammaa kana iddoolee garaa garaatti walitti bu’iinsa umaame namoota harka keessaa qaban qulqulleessuf akkasumas hojii biroo hafan raawwachuuf guyyaa 14 dabalataan gaafatameera.
Miidiyaalen maqaa namaa eerun uffata mana sirreessaan suuran deeggaramuun odeeffannoo madaalawaa hin taane tamsaasanitti ajaajni akka laatamu jedhameera.
Dabalataanis qorataan poolisii dhimmicha waliin hidhata qabu warreen jedhaman xumuree jira jechuun fi abbaan alangee himata irratti banuuf yeroo dabalataa gaafachuu hin qabu jechuun mormee jira.
Gama biraanis qorataa poolisii hojii qorannoo ariitin hin raawwanne jechuun manni murtii ija haqaan ilaalu qabu jechuun komii dhageessisee jira.
Shakkamaan mirgi wabii eeyyamameefi qorannoon yoo itti fufe rakkoon uumu hin jiru waan ta’eef mirgi wabii eeggamuufi akka qabu gaafateera.
Qorataan poolisii gama isaan shakkamaan wabiin yoo bahe ragaa dhoksuun adeemsa qorannoo gufachiisuu danda’a jechuun mirga wabii mormee jira.
Manni murtii dhimmicha hordofe miidiyaan kamuu dhimma gara lachuu karaa madaalawaa ta’een akka gabaasuu qabu hubachiisun,mirga wabii bira darbuun poolisiif guyyaa qorannoo dabalataa 8 eeyyameera.
Ityoophiyaa hundi walqixxooman keessa jiraatu ijaaruuf ODP hojjechaa jira-MM Dr Abiy
Mootummaan dhimma Naazraawiit Abarraa dhiyeenyan hordofaa jira
Preezdaant Saahilawarq preezdaantii Koongoo Fiiliiks Tishikeed waliin mari’atan
Jijjiiramni akka biyyaatti dhufe invaastimantii sadarkaa ol aanaan guddisuu danda’a-…
Bilbiloonni ammayyaa fakkii 3D mul’isuu danda’an oomishaman